Okwuntughe: Jikwaa Mgbasa ozi na Ad-minister | Martech Zone
Oge ọ bụla m ga-anwale ụfọdụ mgbasa ozi na saịtị m, mgbe niile m ga-abanye na onye nrụpụta isiokwu ma dezie isi koodu ha… ihe na-atụ m ụjọ. M na-anwale nnọọ ole na ole ad plugins m WordPress blog, ma ọ dịghị onye n'ime ha siri ike zuru ezu.
N’izu a, emesịrị m chọta ihe m chọrọ site na ngwa mgbakwunye WordPress ad njikwa, a na-akpọ Ad-minister.
Interface maka Ad-minister abughi mmuta, mana njirimara ya zuru oke. Lee usoro iji hazie Ad-minister, lelee saịtị onye edemede maka nkọwa ndị ọzọ:
Wụnye ma rụọ ọrụ ngwa mgbakwunye ahụ.
Tinye koodu dị mkpa na isiokwu gị, gbaa mbọ tinye nkọwa dị ukwuu maka ọnọdụ ahụ - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere mpaghara ole na ole:
'Top banner', 'description' => 'Nke a bụ ọkọlọtọ n'elu ibe ọ bụla', 'before' => '> div id = "banner-top">', 'after' => '> / div> '); do_action ('ad-minister', $ args); >>
Gaa na gị jikwaa taabụ wee họrọ Ad-ozi.
pịa Ọnọdụ / Wijetị taabụ ma ị ga-ahụzi ọnọdụ niile ị gbakwunyere n'ime imewe isiokwu gị.
Ugbu a pịa Mepụta Ọdịnaya. Agafee koodu gị, họrọ ọnọdụ ebe ịchọrọ ka ọ gosipụta ma ị pụọ ma na-agba ọsọ. Hụ na ịdebanye aha ọdịnaya ga - eme ka mgbasa ozi gị dị iche.
Pụọla ugbu a na-agba ọsọ!
Ihe mgbakwunye ahụ nwekwara arụmọrụ ndị ọzọ dịka akara ụbọchị, ọnụọgụ nke pịa, wdg. Ọ bụ ngwa mgbakwunye siri ike nke nwere ihe niile ịchọrọ iji jikwaa mgbasa ozi dị mfe na WordPress blọgụ!
Tags: hyperlocalmysql ọchụchọnkwaliteswagwagsụọ ngọngọWalmart
Jun 10, 2008 na 12: 26 PM
Amalitere m azụmaahịa ụlọ nke m ma ana m eme nyocha maka etu esi akpọsa ngwa ahịa. Agara m na blọọgụ a ma nwee mmasị na echiche mmemme a n'inyere obere azụmaahịa aka ịmalite mgbasa ozi ka mma. M ga-eleba anya na ozi a. M na-achọkwa mgbasa ozi ọzọ "enyemaka" a na-akpọ Glyphius? Younụtụla ya? Daalụ maka ịkekọrịta echiche ọ bụla na inye m onyinye ọzọ magburu onwe ya na ihe m ga-eleba anya!